ဒတ်ခ်ျသွားပါ Dutchtown အိမ်လုပ်နည်း • DutchtownSTL.org • Dutchtown၊ St. Louis, MO
ဒတ်ခ်ျသွားပါ Dutchtown အိမ်လုပ်နည်း
ပါဝင္ရန္ Dutchtown ပင်မလမ်းများ နှင့် Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း Dutchtown ကို အိမ်ဖြစ်စေ မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို လေ့လာရန် သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းအတွက်။ ပထမအကြိမ်အိမ်ဝယ်သူများ၊ ဝင်ငွေနည်းသောနှင့် အလယ်အလတ်ရှိသော ဝယ်သူများ၊ ငှားရမ်းသူများနှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်တွင် အမြစ်ချလိုသူတိုင်းအတွက် အရင်းအမြစ်များစွာရှိပါမည်။
ဒီပွဲကို မတ်လ ၁၆ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၅း၃၀ နာရီမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိန့်လူးဝစ်လူသားများအတွက် Habitat3830 South Grand Boulevard ချီပီဝလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ သင်လာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပြီး သင့်သူငယ်ချင်းများကို ပြောပြပါ။ Facebook အဖြစ်အပျက်စာမျက်နှာ.
သတင်းအချက်အလက်များစွာအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dutchtown စားသောက်ဆိုင်များမှ သရေစာများ၊ အဖျော်ယမကာများနှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို တက်ရောက်သူများအတွက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ Dutchtown ကို အိမ်ခေါ်ရန် ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောအရာကို ရှာဖွေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းတွင် သင်အဘယ်ကြောင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရမည်ကို လေ့လာရန် သင်နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Go Dutch အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ စပွန်ဆာများ Brian Allen—နောက်ထပ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ Roeseler, ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်, အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း BankCentre, ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု, များသောဘဏ်, RE ရင်းမြစ်, Stephanie Nelson Pondrom—Coldwell Banker Gundaker, စိန့်ဂျိုးဇက်အိမ်ရာစီမံကိန်း, Tower Grove Neighborhoods Community Development Corporation ဖြစ်သည်နှင့် အမေရိကန်ဘဏ်. အကယ်၍ သင်သည် ဤအစီအစဉ်ကို ပံ့ပိုးကူညီရန် စိတ်ဝင်စားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ info@dutchtownstl.org.
ဒတ်ခ်ျသွားပါ 2019 ခုနှစ်
အထူးသဖြင့် ဒတ်ခ်ျတောင်းတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်းအကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကမ်းလှမ်းသမျှနှင့် မရင်းနှီးဖူးသော အိမ်ခြံမြေ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးရန် နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် Dutchtown အိမ်ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်း လေ့လာရန် ကျယ်ပြန့်သော အေးဂျင့်များ၊ ငွေချေးသူများနှင့် လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် အိမ်နီးချင်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းများပေးသည့် အောင်မြင်ပြီး ကောင်းစွာတက်ရောက်သည့် ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 2019 Go Dutch အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။ အဖြစ်အပျက် ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ပရိုဂရမ်များမှ ပစ္စည်းများရှာဖွေပါ။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် မတ်လ 14th, 2022 .
ဒိန်းမတ် ဒတ်ခ်ျသွားပါ Dutchtown အိမ်လုပ်နည်း